Chokwadi cheUmambo—Kupa Zvokudya Zvokunamata | Umambo hwaMwari
Kuruboshwe: Hanzvadzi kuAlabama, U.S.A., ichiridza pagiramufomu hurukuro yakarekodhwa yaHama Rutherford, ma1930 ava kuda kupera; kurudyi: Switzerland
UNOONA munhu wauri kudzidza naye Bhaibheri achinyatsogutsurira paanonzwisisa zvinorehwa nerugwaro rwamuchangobva kuverenga mose. Anobva ataura achinonokera kuti, “Muri kureva here kuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti tinokwanisa kurarama nekusingaperi muParadhiso pasi pano chaipo?” Mumwe wako wauri kuparidza naye anonyemwerera obva ati, “Hameno kuti manzwa kuti Bhaibheri ratii?” Ashamisika, mudzidzi wacho anodzungudza musoro achiti, “Ndiri kushamiswa kuti nei ndisina kumbobvira ndazvidzidza!” Unobva wayeuka kuti akambotaura zvakada kudaro vhiki rapfuura, paakadzidza kekutanga kuti zita raMwari ndiJehovha.
Zvakamboitikawo kwauri here? Zvakaitika kuvanhu vaMwari vakawanda. Ichi chimwe chezvinhu zvishoma zvinotiyeuchidza kuti zivo yechokwadi yatakapiwa chikomborero chaicho! Chimbofunga kuti: Wakawana sei chipo ichocho? Muchikamu chino tichaongorora mubvunzo iwoyo. Kuziva chokwadi zvishoma nezvishoma kwakaita vanhu vaMwari kunonyatsoratidza kuti Umambo hwaMwari huriko zvechokwadi. Patova nemakore zana, Mambo wahwo, Jesu Kristu, achiva nechokwadi chekuti vanhu vaMwari vari kudzidziswa chokwadi.
Umambo hwakagara huri muchinangwa chaJehovha kubvira pakutanga here? Jesu akajekesa sei Umambo?
Umambo hwakagadzirisa chii panyaya yezita raMwari? Iwe pachako uri kuita sei pakutsveneswa kwezita raJehovha?
Nzwisisa zvakajeka nezvoUmambo hwaMwari, vatongi vahwo uye vahuchatonga, uye kuvimbika kwahuri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chokwadi cheUmambo—Kupa Zvokudya Zvokunamata